UMarketerHire: Lapho Ungaqasha khona Umaki Wokuzimela oVetted | Martech Zone
Lo nyaka ube yinselelo ezinhlanganweni eziningi. Yize iyi-anecdotal, izitayela ezintathu engizibonayo yilezi:
Inguquko Digital - ukugxila kwangaphambilini kokuhlangenwe nakho kwamakhasimende kwangaphandle kudlulele ekuzenzekelayo kwangaphakathi nasekuhlanganisweni nezinhlangano ezinkulu njengoba zinciphisa abasebenzi nezindleko.
Amaqembu akude - ngenxa yokushintshela ekusebenzeni ekhaya ngesikhathi salo bhubhane, izinkampani ziye zashintsha imibono yazo ekusebenzeni ekhaya futhi zivulekele kakhulu ukusebenza njengeqembu elikude.
Osonkontileka Abazimele - izinkampani ezinkulu zengeza abasebenzi babo besikhathi esigcwele ngezinkontileka nabasebenza ngokuthengisa kwezilwandle. Kusukela ku- “CMO for Hire” kuye kubadwebi bezithombe… osonkontileka baba yingxenye ebalulekile yazo zonke izinkampani.
Ungawatholaphi ama-Freelancers Wokumaketha
Ngenkathi kunenqwaba yamasayithi aku-inthanethi ukuthola ithalente, kunezinsizakusebenza ezimbalwa ezisiza ekuhlolweni nasekulawuleni ithalente ongena kulo. Futhi, iningi lezinsizakalo lidinga ukunxenxa okubanzi kanye nenkontileka yesikhathi semali kanye nezimali zokuqeda yize kunamazinga amakhulu wokwehluleka.
I-MarketerHire iyinsizakalo yokuqasha ithalente elihlolwe ngaphambilini ukuze inhlangano yakho ingeze umakethi oqinisekisiwe eqenjini lakho esikhathini esingaphansi kwesonto! Banikela ngezimali eziphansi zokuqasha, akukho mali yokuqeda, futhi banezinga eliphansi kakhulu lokwehluleka ukuqasha ngehora, itoho, noma izinsiza zesikhathi esigcwele.
Indlela Abathengisi Bama-Vets AbakwaMarketerHire
IMarketerHire inenqubo eqinile yokuhlolwa kwama-freelancer futhi iyabamaketha ngokwabo - ngakho-ke bafuna ochwepheshe abafakazelwe abanothando nokushayela. Amakhulu abathengisi basebenza inyanga ngayinye, kepha I-MarketerHire uqasha kuphela ngaphansi kuka-5%. Bona:
Qasha Abadlali Abaphezulu - baqapha amaqembu e-Facebook, izinkundla, kanye ne-LinkedIn ukuthola nokuqinisekisa ithalente.
Ukubuyekezwa Kwekhono Lokujula - babuyekeza isipiliyoni sobungcweti, impendulo yamakhasimende, namasampuli omsebenzi kanye nokuhlolwa okuqondene nekhono.
Ingxoxo Yevidiyo - ukuhlola amakhono wokuxhumana, ukucabanga okujulile, nobuchwepheshe.
Amaphrojekthi Wokuhlola - ngemuva kokwamukelwa, abazongenela ukhetho babelwa iphrojekthi yokuhlola enezimo zomhlaba wangempela ukukhombisa ukusebenza kahle, ubuhlakani, ubuchwepheshe kanye nobuqotho.
Ukuqhubeka kobuhle - ukusebenza kubuyekezwa namakhasimende njalo emavikini amabili ukuqinisekisa insizakalo esezingeni eliphakeme kanye nokuxhumana.
Uzohlanganyela nomphathi wokumaketha kuyo yonke inqubo. Bazoxoxa ngephrojekthi yakho nawe, basize ukunquma ukuthi yini oyidingayo, futhi bakufanise nomthengisi. Ngemuva kokuqashwa kwakho, bazongena ukuqinisekisa ukuthi izindinganiso zethu eziphakeme ziyafinyelelwa.
Inqubo ye I-MarketerHire iyashesha futhi ayinamthungo:
Chaza iphrojekthi yakho - Tshela uMarketerHire ngephrojekthi yakho. Ngabe ufuna uchwepheshe wesiteshi esisodwa noma ukwakha iqembu leziteshi eziningi? UMarketerHire uzohlela ucingo nawe ukuze ufunde kabanzi ngephrojekthi yakho futhi uthole ukuqonda okungcono kwezidingo zakho ngqo.
Hlangana nomthengisi wakho ophelele - Lapho umphathi wakho wokumaketha eseyiqonda iphrojekthi yakho, bazobheka inethiwekhi yabo yabathengisi ukuthola umdlalo omuhle. Batshele ukuthi uyamthanda umthengisi onconyiwe futhi sizohlela ikholi yokuqala ukuze ukwazi ukuhlangana nabo futhi ubuyekeze iphrojekthi. Uma ungaqiniseki nge-freelancer, bazosetha ama-intro amaningi.
Qalisa iphrojekthi yakho - Ngokushesha nje lapho uvumela umthengisi wakho, bazobe sebekulungele ukuqala iphrojekthi futhi bahlanganyele nethimba lakho. Umphathi wakho uzongena njalo emavikini amabili. Uma nganoma ngasiphi isizathu ungajabuli ngomkhangisi wakho, bazokufanisa nesisha.
Akukho okuthunyelwe kwemisebenzi, akukho zingxoxo, akukho ukuphathwa ikhanda… zama I-MarketerHire namuhla. Izindima ezitholakalayo zifaka phakathi abathengisi be-Amazon, abathengisi bohlobo lomkhiqizo, Abaphathi Abakhulu Bezentengiso, abathengisi bokuqukethwe, abathengisi be-imeyili, abathengisi bokukhula, abathengisi be-SEO, abathengisi bokucinga abakhokhelwayo, abathengisi bezokuxhumana nabantu, kanye nabakhangisi bezokuxhumana abakhokhelwayo.
Qasha Abathengisi Faka isicelo njenge-Freelancer
Ukudalula: Ngisebenzisa eyami I-MarketerHire isixhumanisi sokusebenzisana kulesi sihloko.
Tags: Abakhangisi abazimelemakhiabathengisiabathengisi abazimeleabakhangisi bokusesha abakhokhelwayoabakhangisi bezokuxhumana abakhokhelwayokhokha abathengisi ngokuchofoza ngakunyeabakhangisi bezokuxhumanaabathengisi bezokuxhumana